China YCVX-Hydrocyclone နံရံစက်နှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများ | ရိုးရာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ကလုန်းအစိတ်အပိုင်းများသည် ၁၀၀% ကမ္ဘာ့အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်လဲလှယ်နိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့် R55 ရာဘာကိုအသုံးပြုသည်
YAAO သည်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ကလုန်းဆိုင်ရာအဝတ်အစားများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်နှင့်သင်၏ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ကလုန်းများအတွက်တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။
YAAO Hydrocyclone Liner သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကွင်းဆင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းကိုသက်သေပြခဲ့သည်။
၁။ သက်တမ်းကြာရှည်ခံသောဘ ၀ ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
အလွန်အမင်းထိရောက်စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက် 2. ရှုထောင်တိကျမှန်ကန်မှု
နှိုင်းယှဉ်ပစ္စည်းများထက် 4. ပိုမိုကုန်ကျစရိတ်ကိုထိရောက်သော
•မသက်ဆိုင်ဘဲတူညီသော underflow သိပ်သည်းဆကိုပေးစွမ်းပါသည် အတွက်စိုင်အခဲအကြောင်းအရာမဆိုထိန်းအကွပ်မဲ့အပြောင်းအလဲ အစာကျွေးခြင်း
•မမျှော်လင့်သော tramp ကြီးများလွန်းခြင်းကိုအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်သည် ပလပ်မပါဘဲအစာကျွေး
•အလွန်မြင့်မား underflow သိပ်သည်းဆထုတ်လုပ်သည် (မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ 'roping' ကိုမစွန့်ဘဲရေနှင့်ရေညှိ အဆိုပါလျှံမှတဆင့်စိုင်အခဲဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအခြေအနေများ
• underflow သိပ်သည်းဆ၏ရိုးရှင်းသောအပြောင်းအလဲပါရှိပါတယ်, မပါဘဲ, အ siphon ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်ကနေတဆင့်လိုအပ်အဖြစ် ဒုက္ခနှင့်စျေးကြီးဖို့လိုအပျ စက်မှုသို့မဟုတ်ဟိုက်ဒရောလစ်ချိန်ညှိ spigot အစီအစဉ်များ
•နိမ့်သော spigot ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကယ်တင်။ Theအမျိုးမျိုးသောအင်္ဂါရပ်များနှင့် dewatering ၏အကျိုးကျေးဇူးများကို ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ကလိုုန်းကိုဆိုလိုသည်မှာယူနစ်ကိုအရွယ်အစားရှိသည် သည်အခြား dewatering devices များထက်သိသိသာသာသေးငယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းကိုအလွယ်တကူတည်ဆောက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဆိုလိုသည် ဖန်သားပြင်နှင့်အတူအသုံးပြုရန်အတွက် bins ကျော်
• Flotation အေးစက်အစာပြင်ဆင်မှု
•အကြီးစားသတ္တု (တိုက်တေနီယမ်သဲများ) ထုတ်လုပ်ခြင်း
• granulated slag စွန့်ပစ်
•လေဟာနယ် filter များသို့ feed ၏ကြိုတင်ထူခြင်း
ရှေ့သို့ AH Slurry ရာဘာစုပ်စက်
နောက်တစ်ခု: L-Type Slurry Pump Frame Plate Liner